China Readymade Roller Mapofu Vakatengesa kunze uye Kambani | ETEX
Jacquard Roller Bofu Mapudzi
Blackout Roller Mapofu Mapudzi
Tumira email kwatiriDhawunirodha sePDP
Mucheka maRoller blinds anova anozivikanwa zvakanyanya munyika ikozvino yekushongedza windows. Tora zvakanakira nyore nyore kushanda, nyore maitiro, kusingaperi kusarudzwa kwemachira. Vanhu vanosarudza maRoller mapofu zvakanyanya uye zvakanyanya zvekushongedza. Readymade roller blinds inopa yakazara yakazara yezvinhu zvine hukama uye micheka, mutengi anogona kuvhura nekuisa iyo DIY. Easy kuisa uye nyore kuchinja.
Roller blinds Basa:
Roller blinds ndiyo inodhura, inoshanda uye inoshanda nemhando yemadziro bofu mhinduro iri rechinyakare asi razvino.
roller blinds inobvumidza iwe kuti ugadzire chaiyo iyo chaiyo mamiriro uye mumhepo yaunoda imba yako nekukurumidza
roller Mapofu anokodzera zvakakwana chero saizi rewindo, uye ipa rakapfeka, razvino kutaridzika kwekushongedza kwako.
roller Mapofu anouya mune yakasarudzika mhando yeanodzora zuva machira anosanganisira kusviba, translucent, uye sunscreen.
Iwe unogonazve kuve neyakakwana yekudzora nekaviri roller blinds uye ingo tendeuka kubva ku translucent, kana sunscreen uchienda kublackout chero nguva, uchichengeta imba yakanaka gore rese. Chishandiso chekudzvanywa chakaiswa nechero cheni dzekutonga kuitira shuwa mwana wako.
Roller blinds Kushandiswa:
Shandisa zvakanyanya muCafé, Chikoro, Imba, Nzvimbo yekutengesa, zvitoro, furati, chipatara uye nedzimwe nzvimbo dzose dzinobikwa. Roller blinds ose anoshandisa zvemukati kana kunze. Kubva pane kusingaperi kusarudzwa kwemapofu zvinhu uye masisitimu.
Roller blinds Type:
Nemaoko Shandisa roller mapofu
Double Roller Bofu
Blackout Roller Mapofu
17mm Mini Roller Bofuofu kushongedzwa kwewindo
Mucheka Weshizha, 100% polyester
Kubata Ac Acating kubatika
Kukurumidza Kujeka> Australia 4.5 Giredhi
Roller Tube Aluminium alloy 17/25/28/32/35/38 / 40mm
Pasi Rail Aluminium alloy, gorofa chimiro / arc chimiro / kutenderera chimiro
Operation System Cord tambo / mapurasitiki cheni / simbi cheni / ari kure kutonga
Nzira yekushanda Kurudyi / Kuruboshwe
Inoshandiswa Kukurara, Hotera, Balcony, Sitting room, Hotera, Hofisi nezvimwe.
Chimiro chemazuva ano chiri nyore
Basa Shading, Kupisa kuputira
Inotevera: Curtain / Roman Fabrics